Ny fampiharana fomba fahandro dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Fampiharana mahandro tsara indrindra ho an'ny Android
Ny findaintsika Android dia mety ho tena manampy raha mahandro. Satria manana rindranasa marobe izahay amin'izao fotoana izao izay manolotra anay ny fomba fahandro tena izy na lafatra mety indrindra amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Ka dia ataon'izy ireo tsotsotra kokoa ny fizotran'ny fandrahoana sakafo. Noho izany, afaka mamoaka ilay chef izay entintsika ao amintsika isika amboary ny lovia tsara indrindra.
Noho izany, Avy eo dia avelanay ianao hisafidy ireo rindranasa an-dakozia tsara indrindra ho an'ny Android. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny manamboatra karazana resipeo isan-karazany hiomanana amin'ny toe-javatra rehetra. Noho izany dia hanana resipeo foana ianao izay hanampy anao.
Ireo rindranasa resahina rehetra ireo ho an'ny Android dia misy safidy maro azo atao. Ka manana fomba fahandro amin'ny karazana toe-javatra rehetra ianao. Ho fanampin'ny fananana lovia vegetarian na vegan ho an'ireo izay manaraka ireo sakafo ireo.
1 Fomba fahandro mahandro maimaim-poana
2 Recipe vegetarian
3 Channel amin'ny lakozia
4 Vegamecum - Recipe Vegan
5 Recipe de desserts
Fomba fahandro mahandro maimaim-poana
Manomboka amin'ny ity fampiharana izay ahitantsika ny fomba fahandro maherin'ny 30.000 misy. Ho fanampin'izay, misy vondron'ireo mpampiasa mizara ny fomba fahitan'izy ireo manokana ary mizara ny fahalianany amin'ny fandrahoan-tsakafo. Ho amin'izay halehanao afaka mianatra sy mahalala resipeo vaovao maro. Mifanakaloza torohevitra na fika amin'ny mpampiasa hafa amin'ny fampiharana ihany koa. Ny zavatra tsara dia fampiharana ho an'ny mpahandro mahandro sy ireo izay tsy manana traikefa amin'ny fandrahoana sakafo izany. Manana fomba fahandro isan-karazany izahay, voalamina tsara.
La maimaim-poana ny fampidinana ny app Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Resipe fandrahoan-tsakafo maimaim-poana - ny vondrom-piarahamoninao mahandro sakafo
Developer: Rohy mankany amin'ny haino aman-jery
Faharoa hitantsika izany fampiharana izay mety indrindra ho an'ireo vegetarian rehetra. Satria manana eo am-pelatananay ny fomba fahandro marobe izay tsy mampiasa hena na trondro. Misy ny zava-drehetra amin'ny resaka fahasarotana, ka safidy tsara ho an'ireo maniry zavatra tsotra na ho an'ireo te-hanao lovia be pitsiny kokoa. Manana sivana isan-karazany izy io ahafahantsika manitsy ny fikarohana amin'ny fomba tsotra ary mahita izay rehetra tadiavintsika. Ho fanampin'izay, manana isa tsara dia tsara avy amin'ny mpampiasa.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Channel amin'ny lakozia
Ny fantsom-pahitalavitra dia manana fampiharana ho an'ny Android. Toy ny amin'ny fandaharan-dry zareo alefan'izy ireo dia ahitantsika amin'ity tranga ity ny fomba fahandro marobe azo alaina amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Zavatra izay mahatonga azy io ho safidy tsara hodinihina. Satria afaka manomana lovia ho an'ny toe-javatra na fisehoan-javatra isika. Ho fanampin'izay, ny fomba fahandro rehetra azo alaina ao amin'ny fampiharana dia hazavaina tsara. Mba hahafahan'ny tsirairay manaraka sy maka tahaka azy ireo any an-trano. Fampiharana lakozia tsara hodinihina.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita doka.
Vegamecum - Recipe Vegan
Betsaka ny olona miloka amin'ny veganism. Noho izany, raha iray amin'izy ireo ianao, ity fampiharana ity dia safidy tsara hodinihina. Hatramin'ny nahitantsika a fisafidianana karazan-tsakafo vegan fa ho vitantsika ao an-trano. Manana resipeo maro izy ireo, nohazavaina tsikelikely tsikelikely. Amin'izay dia ho azontsika atao ny maka tahaka azy ireo amin'ny fomba tsotra ao an-trano. Inona koa, isan-kerinandro dia misy resipeo vaovao azonay andramana koa. Manana isa tsara dia tsara avy amin'ny mpampiasa.
La maimaim-poana ny fampidinana ity app fandrahoana sakafo ity ho an'ny Android. Fa mahita fividianana ao anatiny izahay.
Recipe de desserts
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ny tsindrin-tsakafo, izay mety tsy ho hita ao amin'ilay lisitra. Miatrika ny iray amin'ireo rindranasa fanaovana tsindrin-tsakafo tsara indrindra izay hitanay izahay. Manana safidy malalaka izy ireo, ankoatry ny karazany sy ny zava-tsarotra rehetra. Ka na iza na iza mpampiasa dia afaka manomana an'ireny tsindrin-tsakafo ireny any an-trano. Araka ny nohazavaina tsara ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana mahandro tsara indrindra ho an'ny Android
Ny rindranasa tsara indrindra hianarana mihira amin'ny Android